Daawo Video: "Ma banaana Labo ama dhowr Qabiil in ay dhistaan Maamul Goboleed" | KEYDMEDIA ONLINE
Daawo Video: “Ma banaana Labo ama dhowr Qabiil in ay dhistaan Maamul Goboleed”
London (KON) - Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamud ayaa Caaawa Mac-hadka Labaad ee Aduunka ugu weyn ee lagu barto xiriirka Caalamiga ah Chatham House London ka Jawaabay Su'aala ay weydiiyeen qaar kamid ahaa Dadka Goobtaas ku sugnaa.
Madaxweynaha ayaa Arimo farabadan ka hadlay oo ay kamid yihiin Kufsiga, Aminiga Dalka, Korontada, Biyaha, Arimaha Jubbooyinka iyo iyo iyo.
Mid kamid ah Dadkii Shirka kasoo Qeybgalay ayaa Madaxweynaha wuxuu weydiiyay Sababta uu u hortaaganyahay Arimaha Jubbooyinka, ayuu Xasan Sheikh ugu Jawaabay.
"Sax ma ahan sidaas Hadalka u tiri, Aniga waligey ma aanan dhihin Shacabka Hiiraan hasoo doortaan Maamulkooda, Jubbooyinkanah Anakaa u dhiseyna Maamul" "Waxaan ku jirnaa Qarnigii 21aad oo Cadayn Maqal iyo Muqaal ah la haayo"
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: "Dastuurku wuxuu Qoraya in Labo Gobol ama in ka badan ay dhisan karaan Maamul Goboleed, ee Dastuurka kuma qorna in Labo ama dhowr Qabiil ay dhistaan Maamul Goboleed."
"Aniga ma ahi Madaxweynaha Qabiil gaar ah, Aniga ma ahi Madaxweynaha Diin gaar ah, Aniga waxaan ahay Madaxweynaha Ummada Soomaaliyeed...! "
Madaxweynuhu markuu Jawaabtiisi dhameystay ayaa Howlkii markaliya Sacab isqabsaday.
Dhanka kale, madaxweynaha ayaa ka hadlay Waxbarashada, iyo Waxbarasho la'aanta ka jirta Dalka, isagoo sheegay in inta badan caruurta Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku nool aysan haysan waxbarasho, balse ay dowladdu waddo qorshayaal ay caruurtaas ay ku heli lahaayeen waxbarasho dhameystiran.
“Caruurta Soomaaliyeed 25% ayaa iskuullada aada, 75% ka mid ahna way iska ciyaaraan oo ma haystaan waxbarasho , taasna waxay caddeyn u tahay dhibaatada dhinaca waxbarashada ah ee haysta ubadka Soomalaiyeed”